Temarios na-emegide Correos 2022 ▷ mee ka emelitere ha Ebe a! | Nhazi na ọmụmụ ihe
Zipu usoro mmegide
Mgbe mbipụta nke ọkwa banyere mmegide nke Correos, oge eruola itinye akwụkwọ. Kwa afọ, Correos na-ewepụta oku ọhụrụ maka ule asọmpi iji belata afọ ole ndị ọrụ na-arụ, yabụ ọ bụ oge dị mma ịmalite ịmụ akwụkwọ emegide Correos. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmụtakwu, lee, anyị na-agwa gị ihe niile.
Ebubere agendas nke Correos mmegide
N’okpuru ị ga - ahụ ngwugwu niile anyị nwere agendas nke emelitere ka ị nwee ike ịnabata ọfụma n ’ọnụ ahịa kacha mma. Ihe karịrị 95% gafere na Mmegide nke Correos na-akwado anyị!
Ọ bụ nhọrọ dị ọnụ ala na nke zuru oke ebe ọ bụ na mgbakwunye na ịnata mpịakọta abụọ ahụ na ederede emelitere site na Correos, ị ga - enweta:
Akwụkwọ iji kwadebe ule nyocha nke sayensị
Nyocha ule na-eme
Ule iji kwadebe maka ule
Tonweta na ebe nrụọrụ weebụ n'ịntanetị na ihe onwunwe nke ga - enyere gị aka ịkwalite nkwadebe gị maka ịkpọ oku.
Onu ogugu bu nke ndi choro iji kwadebe dika o kwere omume maka ule a, ebe obu na ihe ozo di na nchekwa a, ị gha enweta otutu ihe ndi ozo:
Nkọwa okwu na nkọwapụta iwu site na isiokwu
Ebumnuche na eserese iji kwado mmụta
Nchịkọta nke isiokwu ọ bụla na usoro ọmụmụ ọmụmụ ihe
Mock exams na ezigbo atụmatụ
Usoro na usoro mmụta iji kwadebe maka ule ahụ
Nkọwa ọgwụ nke isiokwu ndị dị mkpa
Mmekorita ihe omuma
Nyochaa site na oku gara aga nyochara
Also ga-enwe ohere ịbanye na agụmakwụkwọ maka ọnwa 3 ma ọ bụ ọnwa 12, dabere na oge ị ga-agụ.
Ego adịgboroja nke ọnwa atọ gụsịrị akwụkwọ
Ọ bụrụ na ị nweghị mmasị na ngwugwu ndị a, ị nwekwara ohere ịzụta ngwaahịa ịchọrọ n'otu n'otu. Ndị a bụ nhọrọ dị:
Naanị agendas: nke a bụ ihe omume Post Office niile emelitere na oku ikpeazụ.
Nyocha Mock: na-eme ule ahụ n'ụzọ kachasị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
Akwụkwọ gafere psychotechnics: ihe ị ga-eme iji nweta ọkwa dị mma bụ ịme ule niile enwere ike. kedu ihe ị na-eche?
Nkwadebe nke ọtụtụ nhọrọ ule: nwere otutu ajụjụ ịmara onwe gị n'ụdị ule a.
2020 na-akpọ maka mmegide post-op
Correos akpọwo ebe 3.421 maka oku 2020. Ekwesịrị ikwu na ebe ndị a niile na-agbakwụnye mba. Mgbe ahụ, ị ​​ga-aga ọkwa banyere mmegide nke Correos ma chọpụta ọnọdụ maka mpaghara ọ bụla.
Ozugbo oku ahụ mepere, ọ bara uru nyochaa ule ahụ na-echere anyị. Ọ bụ ihe otu ule na nke puru iche, ma maka nkesa na maka nhazi na ọrụ ndị ahịa. The mbụ, nkịtị ule, dabeere a multiple oke ule nke 60 ajụjụ. Naanị 10 n'ime ha ga-abụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ. Iji mee nke a, onye iro ọ bụla ga-enwe ihe dịka nkeji 55. Ule ndị akọwapụtara nwekwara ọtụtụ nhọrọ. Mana na nke a, a ga - enwe ihe dị ka ajụjụ 40 yana oge kachasị maka ndị mmegide bụ nkeji 35.
Ọ bụrụ na ị gafere ule nyocha na mkpochapu, mgbe ahụ nwale adọ gị kpọkwara ga-abata. Fọdụ n'ime uru ndị akara bụ ndị a:
Ọka na Post Office. N'agbanyeghị ọnọdụ a ga-enwe, n'ime afọ 7 gara aga.
Meela ọrụ na mpaghara ahụ a rịọrọ.
Dabere na Bolọ Ọrụ Job nke ma otu ọkwa na mpaghara.
Ọkwa Mahadum ma ọ bụ Ọkachamara Ọzụzụ Kachasị Elu na nchịkwa, Njikwa, Azụmaahịa, Azụmaahịa na IT.
Usoro ọmụmụ metụtara ọnọdụ ndị etinyere maka ya.
Kwere A ma ọ bụ A1, 3 isi. Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, naanị otu isi.
Biputere ihe ndị chọrọ
Bụrụ ma ọ dịkarịa ala afọ 18 na erubeghị afọ 65.
Akwụkwọ Asambodo Mmụta Secondary manyere, ma ọ bụ Gralọ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na ọkwa ọ bụla ọzọ nwere ike dochie ogo mbụ.
Enweghị ụdị ọrụ ọ bụla edozi na Post Office.
Agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ kewapụ ya na ọrụ ahụ.
Nwee ikike ndị achọrọ iji rụọ ọrụ ndị achọrọ.
Nwere mba Spanish, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ bụrụ nwa amaala nke European Union. Mee ka akwụkwọ ọrụ rụọ ọrụ mgbe niile, iji rụọ ọrụ ahụ.
Iji bụrụ onye nnyefe nzipu ozi, ịchọrọ kaadị A, A1 ma ọ bụ B.
Otu esi edebanye aha maka ndị mmegide Correos
Ihe ederede maka mmegide nke Correos ga-eme ya site na peeji nke gọọmentị ya. Ozugbo oge itinye akwụkwọ gafere, anyị nwere ike ịdebanye aha n'ịntanetị. Iji debanye aha, ị ga-agbaso ọtụtụ usoro:
Ga-abanye na peeji nke nke Correo.es, mgbe ahụ ị ga-aga 'ozi gbasara ụlọ ọrụ', 'Ihe gbasara mmadụ', 'Ọrụ' yana n'ikpeazụ 'ịtọzi ego onwe gị n'ọrụ'.
Nzọụkwụ ọzọ bụ 'ndebanye aha ngwa'. N'akụkụ a, ị ga-etinye NJ gị yana okwuntughe, na-agbaso usoro weebụ na-enye gị.
Ihe nke ato bu kpuchido data nke gi. Lelee mgbe niile na ha niile ziri ezi ma echefukwala ịgụ iwu nzuzo.
Ugbu a, ị ga-ahọrọ mpaghara ebe ịchọrọ ịrụ ọrụ, yanakwa ọrụ ịchọrọ.
para debanye aha, ị ga-akwụ ụgwọ ọnụego nke bụ 13 euro. Ee, tupu euro 10 mana ha arịgoro. Kwụ ụgwọ usoro bụ site na kaadị. Mgbe ekwenyechara ịkwụ ụgwọ ahụ, ị ​​ga-enweta njirimara na arịrịọ nke ịkwụ ụgwọ.
Typesdị akwụkwọ ndị ọzọ yana aha ị nwere, agaghị adị mkpa n'oge a, mana a ga-achọ ya n'ọdịniihu. N'ezie, iji mee mgbanwe ọ bụla, ị ga-akagbu arịrịọ gara aga wee mejupụta nke ọhụrụ.
Salariesgwọ ndị ọrụ nzi ozi
Nke bu eziokwu bu na okwu banyere ugwo bu otu n’ime ajuju ajuju ajuju. Ekwesịrị ikwu na ọnụ ọgụgụ ikpeazụ nwere ike ịdị iche mgbe niile. Ebe ọ bụ na ọ ga-adabere na ịkwụ ụgwọ ọzọ, ogo, ọnọdụ na ihe ndị ọzọ iji chebara ya echiche. Mana ka odi, anyi nwere ezi ego iji nye gi uche:
Ndị isi ọrụN'ime ụdị ndị ọrụ a, anyị ga-ahụ ọrụ nke ndị na-eme ihe ntanetị, onye ntụgharị okwu, ndị ọrụ mkpanaka, onye ọrụ, wdg. Ha niile nwere ụgwọ ọnwa sitere na 1300 ruo 1500 euro.
Ndị ọrụ ọrụ isi: A nta ala bụ ụgwọ ọrụ nke a mkpara. Mana ọ bụ eziokwu na ọ dị obere nke ukwuu, yabụ anyị na-ekwu maka euro 1200 ruo 1400. E kwuru na nke a bụ ụgwọ ọnwa ma ọ bụ ụgwọ ọnwa.
Sort na nkesa ọrụ: Ma isi nke ógbè ahụ na nkewa ọkwa ma ọ bụ nkesa ụkwụ na-akwụ ụgwọ n'etiti euro 1100 na 1300. Otu ihe ahu dikwa obere.
Ndị ọrụ enyemaka: N'okwu a, ndị na-enyere ndị ọrụ aka ga-enweta ụgwọ ọnwa nke 1080 na 1200 euro.
Usoro iheomume maka mmegide nke Correos nwere isiokwu iri na atọ ị kwesịrị ịma:
Isiokwu 1: Ọrụ nkịtị na / ma ọ bụ ọrụ nzipu aha edebanyere, yana ngwaahịa ha na-ezo aka.
Isiokwu 2: Lekwasịrị anya na e-Azụmaahịa na ngwugwu akụkụ.
Isiokwu 3: Valueskpụrụ azụmahịa na ọtụtụ ndị ọzọ gbakwunyere, yana ọrụ ndị ọzọ.
Isiokwu 4: Ntughari nke ikike oru, oru emere na post office.
Isiokwu 5: Digital Management: Data na nhazi na Correos.
Isiokwu 6: Ọrụ ndị ọzọ na ngwaahịa dị iche iche.
Isiokwu 7: Usoro nbanye.
Isiokwu 8: Ọgwụgwọ nchịkọta, ụkpụrụ njem.
Isiokwu 9: Nyefe protocol.
Isiokwu 10: Ngwaọrụ (Ngwaọrụ dịka PDA, IRIS na ọtụtụ ndị ọzọ dị mkpa maka ịrụ ọrụ onye ọrụ n'ọnọdụ ya ma ọ bụ maka ọrụ ọ na-arụ.
Isiokwu 11: Ọrụ ndị ahịa na ọgwụgwọ: Mmekọrịta nke otu, otu esi enweta ọgwụgwọ dị mma nke na-erite uru na onyonyo nke ụlọ ọrụ ahụ.
Isiokwu 12: Businesstù azụmahịa, usoro iwu nke ụlọ ọrụ na atụmatụ azụmaahịa ịgbaso.
Isiokwu 13: Usoro nha anya n'etiti nwoke na nwanyị na ihe ọmụma gbasara iwu gbasara mmekọrịta nwoke na nwanyị na-arụ ọrụ. Mgbochi nke ịzụ ahịa ego na nghọta, ụkpụrụ omume na nkwekọrịta ozi gbasara nchekwa (LOPD).
Isiokwu ndị a niile bụ nke akụkụ nkịtị ma ọ bụ nke usoro iwu. Mana na mgbakwunye, ị ga-agabiga psychotechnics. Maka nke a, ị nwere akwụkwọ ọgụgụ, nke na-adịkarị oge niile yana onye ọzọ nwere ihe ọ bụla ịchọrọ iji merie akụkụ nke akparamaagwa. Echefula iso ụfọdụ na-eme ihe ule mock, yana ụdị ihe ndị ọzọ ga - enyere gị aka ịkwadebe maka ule nyocha ọtụtụ. Iche iche ma ọ bụ ọnụ, ha ga-abụ nhọrọ zuru oke iji nwee ike itinye batrị iji nweta ebe gị.
Uru nke ịrụ ọrụ na Correos
Enwere ọtụtụ elele nke ịrụ ọrụ na Correos. Ọ bụ mmegide nke mpaghara na-enye. Ya mere, ị nwere ike ịhọrọ nke gị, yanakwa ọnọdụ igwu egwu. Salarygwọ ọnwa ya dabara adaba ka ọ bụrụkwa uru ọzọ dị na ya. Ebe ọ bụ na, nke kasị ala ga-agafe 1000 euro.
Usoro ọrụ a ga-arụ dịkwa mkpa mgbe ị na-echebara ha echiche. Fullbụ onye zuru oke ma ọ bụ oge oge. Maka ha enwere ebe niile. Na mgbakwunye, anyị ga-eche na anyị na-eche ihu a arụ ọrụ na ndụ, na ihe niile nke a gụnyere. Ọ bụrụ na ị gosipụta mana inwetaghị ọnọdụ gị, ị nwere nhọrọ ọzọ. Nwere ike ịbanye na Post Office Job Bank. Can nwere ike ịnweta ya ma ị ga-arụ ọrụ n'oge, mana ọ bụ eziokwu na a ga-agụ nke a na akụkụ ziri ezi.